नेकपा अण्डरलाइनबारे फेरि बाबुरामले मुख खोले, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता पश्चगमनको यात्रा हो’ – www.agnijwala.com
नेकपा अण्डरलाइनबारे फेरि बाबुरामले मुख खोले, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता पश्चगमनको यात्रा हो’
नयाँ शक्ति नेपालका संयाेजक डा. बाबुराम भट्टरार्इले पूर्व एमाले र माअाेवादी केन्द्रकाे एकतालार्इ पश्चगमनकाे यात्रामा रहेकाे समुहकाे एकताकाे संज्ञा दिएका छन् ।
यी दुर्इ समुह नाममा कम्युनिस्ट भएपनि सारमा कम्युनिस्ट नरहेकाे बताएका छन् । अनलाइनखबरसँगकाे कुराकानीमा बाबुरामले प्रचण्डले माअाेवादी अान्दाेलनकाे इतिहासलार्इ एमालेमा लगेर विसर्जन गरेकाे गंभीर अाराेप समेत लगाएका छन् ।
बाबुरामसँगकाे कुराकानीकाे सानाे अंश –
एमाले-माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
एमाले र माओवादी केन्द्र घोषित विचारलाई परित्याग गरेर एकठाउँमा आउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
तर, वैचारिक राजनीतिक विषयमा अलि दीर्घकालीन चासो राख्ने व्यक्तिका नाताले केही भन्न चाहन्छु । मार्क्सवाद भनेको गतिशील विज्ञान हो र समयानुसार विकसित तथा परिमार्जन हुन्छ । २००६ सालमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टी, जो दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको परिवेशमा गठन भएको थियो, चिनियाँ क्रान्ति भर्खरै सम्पन्न भएको परिवेश थियो । नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट पार्टीको कोशेढुंगा भनेको ०३० सालको झापा आन्दोलन थियो र त्यसको विकसित रुप एमाले बन्यो ।
अर्को विकसित रुप भनेको ०५२-०६२ को माओवादी जनयुद्ध थियो । म पनि माओवादी आन्दोलनको एउटा संस्थापक र अभियन्ता हुँ । कम्युनिष्ट आन्दोलनकै जोडबलमा नेपालमा जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो र त्यसको उच्चतम माओवादी थियो । गणतन्त्र घोषणा र संविधान बनेपछि त्यसलाई नयाँ ढंगले रुपान्तरित गरेर जानुपर्छ, अब कम्युनिष्ट उही पुरानो रुपमा रहन हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ थियो । म माओवादी आन्दोलनको रुपान्तरण चाहन्थें ।
तर, प्रचण्डले खोल मात्रै माओवादीको समात्नुभयो । सार तत्वलाई छोडेर जसरी एमाले स्खलित भइसकेको थियो, त्यसरी नै माओवादी आन्दोलनलाई स्खलित गर्नुभयो । अहिले त्यही स्खलित एमाले र माओवादी एक भएर २००६ सालको पुरानो नामतिर फर्किने कोसिश गर्नुभयो ।
सांकेतिक अर्थमा त्यो एउटा पश्चगमन हो । एउटा दुःखद परिघटना हो भन्ने कुरापछि इतिहासले आत्मसात गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अस्ति प्रचण्डलाई ‘माओवादी जनयुद्धलाई छोडेर तपाईँ मदन भण्डारी पथमा लाग्नुभएको हो ?’ भन्नुभयो । आज माओवादी स्खलित भयो भन्नुहुन्छ । त्यही आन्दोलनबाट आएको तपाईं आफूचाहिँ के हुनुभएको ?
म रुपान्तरण चाहन्थें । मार्क्सवादी विचार र आन्दोलन, जसलाई कम्युनिष्ट आन्दोलन भनियो, १९१७ भन्दा अगाडि श्रमिक आन्दोलन, सामाजिक जनवादी आन्दोलन भन्ने चलन थियो । कुनै पनि शब्द प्रयोग गर्दै जाँदा त्यो भ्रस्टिकृत हुँदै जान्छ, त्यसको सारतत्वलाई ग्रहण गर्दै नयाँ प्रयोग गरिन्छ । एक सय वर्षसम्म कम्युनिष्ट भन्ने शब्द पनि भ्रस्टिकृत भयो ।
त्यसैले मार्क्सवादी आन्दोलनलाई २१ औं शताब्दीमा अगाडि बढाउन नयाँ पदावली खोज्नुपर्छ र नयाँ उन्नत प्रकारको समाजवादी, लोकतन्त्रमा आधारित रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ थियो । त्यसैले मैले नयाँ शक्तिमार्फत त्यो मार्क्सवादी आन्दोलनलाई २१औं शताब्दी अनुरुप रुपान्तरण गर्न खोजेको हुँ ।
प्रचण्डले जनताको चेतनालाई दोहन गरेर सारतत्व छोड्न तर, कम्युनिष्ट र माओवादी खोल समात्दै आउनु भएको थियो । एमाले पनि ब्रान्ड मात्रै थियो । अहिले त्यही दुई शक्ति मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेका छन् । यो मार्क्सवादी आन्दोलनको भ्रष्टिकृत नै हो ।
फरक के हो भने, म मार्क्सवादी आन्दोलनलाई विकसित र रुपान्तरित गर्न चाहन्छु । उहाँहरु कम्युनिष्टको खोल ओढ्ने तर, त्यो आन्दोलनलाई विसर्जन गर्न चाहन्नुहुन्छ । नेकपाको गठन व्यवहारत मार्क्सवादको बिसर्जन हो ।
माओवादी आन्दोलन, सशत्र संघर्ष र त्यसैको जगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिले आएर त्यही कम्युनिष्ट भन्नासाथ यति धेरै वितृष्णा किन ?
कम्युनिष्ट नामप्रति मात्रै मेरो कुनै आपत्ति होइन । सारतत्व नै फेरौं, चरित्र फेरौं भन्ने हो । सारमा उहाँहरुले चारित्रिक रुपमा चरम प्रकारको नोकरशाही, पुँजीवादको प्रयोग गरिरहनु भएको छ ।
केपी ओलीजी र प्रचण्डजीको शैली उस्तै छ । तपाईले हेर्नुभयो भने जुन प्रकारको कमिसन खोरहरु, विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न तत्वहरुको आड लिएर सत्ता सञ्चालन गर्ने काम गरिरहनुभएको छ, त्यो कसैबाट लुकिरहेको छैन । राज्य संयत्रलाई पनि एक किसिमले आसेपासे र पुँजीवादको विकास गरिराख्नु भएको छ । त्यसलाई परिवर्तन नगरेसम्म कम्युनिजमको खोल मात्रै लगाइदिएर भांग्राको टोपीमा गुहेंलीको फूल भनेजस्तो जनतालाई ढाँट्ने काम मात्रै हुन्छ । त्यसकारण कम्युनिष्ट शब्दप्रति मात्रै मेरो आपत्ति होइन, त्यो प्रकारको सार र रुप पक्ष नै बदलौं भन्ने हो ।